Ụbọchị My Pet » 5 Lelee isi n'ihi na Total Safety na Nche na Online dịwara
5 Lelee isi n'ihi na Total Safety na Nche na Online dịwara
emelitere ikpeazụ: Jul. 05 2020 | < 1
Anyị maara na ọ dị mkpa ka ị na-na-na obodo anyi mma, n'ihi ya, anyị chọrọ anọ a ole na ole oge ime ka ị maara nke online nchekwa.
Soro ndị a ole na ole dị mfe ego ihe na ị nwere ya na akpa!
Okwuntughe kwesịrị mfe icheta site na gị, ma ike maka onye ọ bụla ọzọ na-eche na. Aha ndị mfe icheta, kama dị nnọọ ka mfe prying anya maa!
Ụbọchị My Pet nwere ihe dị ịtụnanya so ozi usoro. Ị ọsọ na-enye ọ bụla ozi kọntaktị ruo mgbe ị dị njikere ma ala. Ekwela ka onye inupụ ị. Were ya na ijeụkwụ gị na-enwe obi ụtọ.
Ọ bụrụ na mmadụ na saịtị jụrụ gbaziri ego, mkpu hey kwesịrị ịmalite ka iba. Enyela onye ọ bụla na saịtị ego, n'agbanyeghị otú ezi ihe mere na-egosi na-. Biko bụla na-akọ so na-arịọ maka ego anyị na-akwado Team onye ga-enwe obi ụtọ ka ichoputa.
The ala akara bụ na i kwesịrị ịdị na-anọ na-achịkwa. Imeri n'ebe ọha, gwa onye na mgbe na ebe ị na-aga, na ndokwa na-akpọ ha na a nyere oge iji gosi na ọ na-aga nke ọma. Ọ bụrụ na gị na ụbọchị bụ kwesịrị, na ha ga-ịghọta.
Ihe ka nnọọ ọtụtụ ndị ị na-ezute online ga-ezi ndị mmadụ dị nnọọ ka unu, ndị na-nanị achọ a ụbọchị ma ọ bụ ụfọdụ enyi. Dị ka ogologo oge ị na-eso ọlaedo iwu na-elekọta – anyị na-n'aka na ị ga-fun!
Cheta, Ụbọchị My Pet ga-ezitere gị ihe ọ bụla e-Gburu-arịọ maka ọ bụla onye nkọwa.
Top 10 Photo mejọrọ
5 Nzọụkwụ na Imeri Mmekọrịta Nkwurịta Okwu mgbochi
Member Safety bụ anyị n'elu priority